NextMapping | Chizvarwa Covid Uye Iyo Ramangwana
NextMping™ Ramangwana reBlog Blog
Tikugashirei kune Ramangwana reBlog blog - apa ndipo paunowana matsamba pane zvese zvinhu zvinoenderana neramangwana rebasa.
Tarisa zvese blog blog
Chizvarwa Covid Uye Iyo Ramangwana
Chizvarwa Covid neramangwana ……
Kune chizvarwa chitsva mudhorobha - yaro Generation Covid inozivikanwawo saGen C. iyo inosanganisira vechidiki vari pasi pemakore makumi maviri.
Unogona kunge uchiziva nezve mamwe mazera:
Gen Z 1997 kusvika 2020 (ziva zvekuve vezvenhau chizvarwa)
Millenials 1981 kusvika 1996 (inozivikanwa nekuve tekinoroji chizvarwa)
Gen X 1965 kusvika 1980 (inozivikanwa nekuve mambakwedza echizvarwa che tekinoroji)
Zoomers (Vacheche Boomers vanoramba zera) 1946 kusvika 1964 (inozivikanwa nekuve post post hondo / rusununguko chizvarwa)
Tsika dzechivanhu 1925 kusvika 1945 (inozivikanwa nekuve chizvarwa chehondo)
Pane tsvakurudzo izvo zviri kungotanga nezve kukanganiswa kwedenda kune vechidiki vari pasi pemakore makumi maviri vanozivikanwa saGen C mugore rapfuura nehafu.
Hapana mubvunzo kuti hukama hwemagariro nedenda iri vose ichiri kuzivikanwa zvizere. Izvo zvakadaro zvinonyanya kufadza kutarisa uye kuona maitiro aGen C nedenda achachinja sarudzo yavo uye hunhu hwavo mune ramangwana.
Chizvarwa C ndicho chega chizvarwa chevechidiki chiri kurarama kuburikidza uye chichava chakararama kuburikidza nedenda mumakore avo ekuumba uye ekuyaruka. Pamusoro pehosha iyi Gen C yakaona kuburikidza nenhau dzezvemagariro zvichiwedzera kusagadzikana kwemarudzi, kusaenzana muhutungamiriri hwehurumende, mhedzisiro yedenda pakudziya kwepasirese uye kuwedzera kutarisisa kuenzana kwevakadzi.
Pasina mubvunzo kutaura shanduko yemagariro ichaunzwa naGen C ichave yakanyanyisa uye inokanganisa mamiriro aripo. Pachave neshanduko zhinji dzakagadzirwa neGeneration Covid uye neremangwana.
Anecdotally Ndine vanoverengeka vatengi vakagovana zvimwe zvekunetseka zvavari kuona vana vavo vadiki vane pamusoro pemwedzi gumi nemasere yapfuura.
Ini ndanzwa nyaya dzepuraimari vana vane makore ane huwandu hwakanyanya hwekushushikana nekuda kwekunge vachidzidziswa chete pamhepo kana kubata nekuvhurwa nekuvharwa kwezvikoro zvavo.
Elementary chikoro vana vane makore vakapfeka mamask (kana vachiri kuenda kuchikoro) uye vamwe havana kuenda kuchikoro kwegore kana mumwedzi mishoma.
Middle chikoro uye vechikoro chesekondari vechidiki vangave vanga vachiita kwavo kudzidza zvakanyanya online kana musanganiswa weimwe nguva mukirasi uye chikamu chikamu nguva online.
Iko kunetseka kwepfungwa kune vanhu uye kunyanya vechidiki kuve vari vega munharaunda kuchave nemhedzisiro yekukanganisa kwemakumi anotevera asingafanoonekwe.
Gen C ichazivikanwa sechizvarwa chehosha iyo ichachinja ramangwana zvisingaite.
Tichiri kuunganidza data nekutsvaga pamusoro pesimba renzanga uye isu tichave tichitsvaga zvimwe patiri kufambira mberi.
Kuti titange kutarisa zvinoitwa nechizvarwa pane ramangwana tinofanirwa kunzwisisa masimba etsika anosanganisira manzwiro avo, hunhu hwavo, zvinokanganisa nharaunda uye maonero avo akaumbwa nezviitiko zvenguva yavo.
Panyaya yemanzwiro eGeneration Covid, takave nevabereki vakati wandei vachitaura kuti vana vavo vari kubata nemanzwiro akaomarara mudenda iri rinosanganisira:
Vabereki vanotaura vachinetsekana nezve huwandu hwekunetseka kwemanzwiro evana vavo uye nekukanganisa kwedenda pahupenyu hwevana vavo hwese.
Nekudaro vabereki vakazivisawo zvakanaka zvinokanganisa zvakatipoteredza zvechirwere ichi nemhedzisiro yazvo pavana vavo se:
Kuwedzerwa nguva yemhuri nekuda kwevabereki vasingafambi kana kuenda
Kuwedzera kuonga kwevana kwekushandisa nguva panze uye mune zvakasikwa
Kuwedzera kufarira nevana kuvandudza uye kubatana kuburikidza nehunyanzvi
Kuwedzera kunzwira tsitsi uye kuziva kune vamwe vanhu
Kuwedzera kwekutarisa pane zvetsika tsika sekugara pasi chikafu
Yakawedzera hurukuro uye kutaurirana nekuda kwekuve pamwe chete
Maitiro anoumba mazera ese - kana iwe ukatarisa pane irwo runyorwa pamusoro pechizvarwa chimwe nechimwe yakave nemafambiro akakosha etsika akaumba maonero avo epasi.
Tichifunga huwandu hwakawanda hwekunzwa kwakaomarara uko Gen C akafamba uye AKAPA iyo yakanaka mamiriro ezvakatipoteredza zvinogona kunge zvakachengeteka kufungidzira zvinotevera fungidziro yeGeneration Covid neramangwana:
Gen C ichaona kusaruramisira kwemarudzi kunge kwekare uye kusingagamuchirwe uye inoda kuripwa uye mhinduro dzeramangwana.
Gen C ichaona kusaenzana kwevakadzi nekusaenzana sekukasira uye kusavimbika uye ichatsvaga kuunza kuenzana uye kuenzana kweramangwana.
Gen C vanozoona basa nenzira nyowani sezvo vanga vaine vabereki vavo pamba pavo panguva yedenda uye saka vachatarisira kuti ivo vachakwanisa shanda chero kupi uye chero nguva pasina chipingamupinyi.
Gen C chichava chizvarwa apo vazhinji vevabereki vanodzokera vakatamira kumaruwa kurarama uye izvi zvinokonzeresa kuti Gen C ive nehukama hwakadzama nepasi uye nekudaro nharaunda.
Gen C ichave nekunzwira tsitsi kwakazara sevanhu vese uye izvi zvichagadzira kutyaira kuti nyika ive nzvimbo iri nani kuburikidza nevezvenhau.
Gen C inonzwisisa zvakadzama kukosha kwehutano hwepfungwa uye hutano uye izvi zvinotungamira mukutarisa pane zvakawedzerwa mhinduro kune vechidiki nevakuru kuvandudza hutano hwakazara.
Gen C ichasundira mari yepasi rose yekumisidzana nekushandurwa kwetekinoroji kuburikidza ne robhoti, blockchain neAI.
Ini handizive nezvako asi ndinofara nekukanganiswa kuchaitwa naGen C mune ramangwana.
Zvandinoziva zvechokwadi ndezvekuti vana vangu vaviri vakura vane mwedzi mishanu nematanhatu vanozogara vachikanganiswa nedenda uye kuti vana vakashinga kwazvo.
Ndine tarisiro yepamusoro yekuti kukanganiswa kweGen C kuri kurarama kuburikidza kuchavashongedzera kutibatsira isu tese kugadzira ramangwana rakanaka.
Sign up ikozvino kuti uzivikiswe nezvenguva yemberi zvinyorwa